ခိုင်ခံ့တဲ့ ကြမ်းခင်းတွေရဖို့ စနစ်တကျကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း - BUILK Myanmar
ခိုင်ခံ့တဲ့ ကြမ်းခင်းတွေရဖို့ စနစ်တကျကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း
အိမ်တစ်လုးံဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် အိမ်ရှင် နဲ့ ကန်ထရိုက်တာတော်တော်များများက လုပ်အားခသက်သာပြီး အချိန်တိုအတွင်း အလုပ်ပြီးမြောက်စေချင်ပါတယ် …..ဒါပေမယ့် လုံလောက်တဲ့အချိန်နဲ့ ကန့်သတ်ချက်အတိုင်း မဆောက်လုပ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဆောက်လုပ်ရေးအတွင်း ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေနဲ့ နေအိမ်ရဲ့ ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုတွေကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ် ။
အိမ်တစ်လုံးမှာ အဓိကအကျဆုံးသော အပိုင်းက အိမ်ရဲ့ကျောရိုးကိုယ်ထည်ဖြစ်ပါတယ် ။ အများအားဖြင့် ကွန်ကရစ်ကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာသုံးပြီး ကွန်ကရစ်ကိုယ်ထည် လို့လည်း ခေါ်လေ့ခေါ်ထရှိပါတယ် ။ ကန်ထရိုက်တာများ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့ ကွန်ကရစ်ရဲ့ အားသာချက်က လွယ်ကူစွာ ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ခြင်း နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများစွာ မလိုအပ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သို့သော် ကွန်ကရစ်ကိုယ်ထည်ရဲ့ အားနည်းချက်က ဆောက်လုပ်ရေးအတွင်း အချိန်ကြာမြင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကွန်ကရစ်လောင်းပြီးနောက် ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ စနစ်တကျမွမ်းမံခြင်း နှင့် ကွန်ကရစ်ခြောက်ချိန်တို့ကို အချိန်ပေးပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပြီး အများဆုံး ၂၈ရက် ၀န်းကျင်ခန့်ဖြစ်ပါတယ် ။ သင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့ ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး နောက်ထပ်အဆင့် စတင်မယ်ဆိုရင် ခိုင်ခံ့မှုအားကောင်းဖို့ကွန်ကရစ်ခြောက်ချိန်ကို စောင့်ရပါမယ် ။ အောက်ပါအချက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ပုံစံခွက် နှင့် ထောင့်တိုင်တွေကို ဖယ်ရှားလေ့ရှိကြတယ် ။
• ဘိလပ်မြေ၏ ဂုဏ်သတ္တိ၊ ကွန်ကရစ်တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ
• အဆောက်အဦး၏ အမျိုးအစား နှင့် အရွယ်အစား
• အဆောက်အဦး၏ ၀န်ခံနိုင်အား
• အပူချိန် နှင့် အခြားသော ဆက်စပ်အချက်တွေ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပုံစံခွက် နှင့် ထောင့်တိုင်များကို ဖယ်ရှားလေ့ရှိကြတယ် ။ဒါ့အပြင် ကွန်ကရစ်လောင်းပြီးနောက် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်က ကွန်ကရစ်ကို ချက်ချင်း Curing ပြုလုင်သင့်ပါတယ် ။ မပြုလုပ်ပါက ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်က မာကျောလာပြီး ကွန်ကရစ်ခံနိုင်အား နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Concrete Curing က ဘိလပ်မြေရဲ့ ရေဓာတ်ကို ပိုမိုဖြည့်တင်းပေးပြီး ခိုင်ခံ့မှုအား နဲ့ ကြာရှည်ခံနိုင်မှုအားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။Concrete Curing ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ကွန်ကရစ်မှ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း တို့ကိုအထောက်အကူပြုစေပါတယ် ။ ထို့သို့ဖြစ်ရန် အောက်ပါအချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် ။
(၁) ရေဖြင့်ပက်ဖြန်းပေးပြီး ကျယ်ပြန့်သော မိုးကာ၊ ဂုန်နီအိတ် နှင့် ဖုံးထားပြီး ရေစိုစွတ်အောင် ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
(၂) Curing Compound ကို ပါးလွှာစွာ အသုံးပြုပေးခြင်း
သာမာန်အဆောက်အဦးတွေမှာ ကွန်ကရစ်ရဲ့ ပုံစံခွက်၊ ထောက်တံများကို အနည်းဆုံး ထားရှိရမယ့်ရက်။
Concrete Curing မပြုလုပ်ခြင်း (သို့) သင့်လျော်သောအချိန်တွင် Concrete Curing မပြုလုပ်ပါက ကွန်ကရစ်ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ခိုင်ခံ့မှုအား လျော့နည်းလာမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော ဓာတုပစ္စည်း (သို့) အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အရာများသည် ကွန်ကရစ်ထဲသို့ စိမ့်ဝင်ပြီး ကွန်ကရစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသော သံချောင်းများကို သံချေးတက်စေပြီး ကွန်ကရစ်တွင် အက်ကြောင်း နှင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်လာတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် Concrete Curing ပြုလုပ်ရန်ကြာချိန်ကို ဘိလပ်မြေ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားထားပါသည်။
Concrete Curing ပြုလုပ်ရန်ကြာချိန် ပုံစံခွက် နှင့် ထောက်တိုင်ဖြုတ်ရန် သင့်လျော်သောအချိန်မှာ ဘိလပ်မြေအမျိုးအစား နှင့် ကွန်ကရစ်လောင်းရာမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အနေအထားပေါ် မူတည်ပါတယ် ။ အဆောက်အဦးရဲ့ ၀န်ခံနိုင်အား အပြည့်အ၀ ရရှိစေဖို့ကွန်ကရစ်ခြောက်ချိန်ကို ၂၈ ရက် ၀န်းကျင်ထားရပါမယ် ။
သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်အချိန်များထက်စောပြီး ပုံစံခွက် နှင့် ထောက်တိုင် ဖြုတ်ရန်လိုအပ်လာပါက နေထိုင်သူတို့ရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် ကွန်ကရစ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ၀န်ခံနိုင်အား ရှိမရှိကို စမ်းသပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ကွန်ကရစ်တွင် ရှိသင့်သော ၀န်ခံနိုင်အားရှိရန် Concrete Curing ပြုလုပ်ချိန်ကို ၁၄ မှ ၂၁ ရက်အတွင်း အချိန်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အချိန်မပေးရင် အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် အင်ဂျင်နီယာထံမှ အကြံဥာဏ် လိုအပ်ပါသည်။
ဘိလပ်မြေအမျိုးအစားအလိုက် ဆောက်လုပ်ရေးကြာချိန်ကို သက်ရောက်ပါတယ် ။ အခြောက်မြန်သောဘိလပ်မြေအား အသုံးပြုပြီး ဒီနည်းလမ်းက ကွန်ကရစ်ခြောက်ရန် နဲ့ Concrete Curing ပြုလုပ်ရန်ကြာချိန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကြာချိန်တို့ကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ် ။ အများအားဖြင့် ဘိလပ်မြေအမျိုးအစားကို အမြန်ပြီးဖို့ လိုအပ်တဲ့နေရာများတွင် အသုံးပြုကြပြီး စသည်နေရာများမှာ ပုံစံခွက် အမြန်ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သောနေရာ၊ ပုံစံခွက်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပရိကတ်(Precast)ကွန်ကရစ်၊ အဆောက်အဦးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း (သို့) ချက်ချင်းအသုံးပြု သွားလာရန်လိုအပ်သောနေရာများ စသည်တို့တွင်ဖြစ်သည်။
Htet Nandar Aung
မိုးရာသီမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်သလဲ ?
Rebars Updated Price Lists Of Yello Myanmar
Updated Yello Myanmar Materials Price Lists
BUILK MYANMAR CO., LTD.
No.(1), Corner of Kabar Aye Pagoda Road & Dhammazedi Road,
Head Office : +951 548260
Email : support@builk.com.mm
facebook : BUILK Myanmar
About BUILK Myanmar
BUILK Myanmar Team
Yello Smart Purchase
PRO NETWORK Users
GO PRO Interview
Construction United Blog
Construction Business Management Blog